जनमत पाएकाहरु जनताको भावना किन बुझदैनन् ? (खोजी जवाफदेहिताको) भदौ २६, २०७५
जनमत पाएकाहरु जनताको भावना किन बुझदैनन् ? (खोजी जवाफदेहिताको) भदौ ३०, २०७५
पार्टीगत हिसाबले ठेक्का पट्टा दिने काम हाम्रो गाउँपालिकामा छैन् : अध्यक्ष जैसवाल आश्विन ३, २०७५
सबै गाउँटोलका सडकमा पीच पु¥याउने मेरो लक्ष्य हो : अध्यक्ष साह शिक्षा, स्वास्थ, सिचाइ सम्बन्धी आवश्यक पर्ने विभिन्न स्रोत, साधन तथा सुविधा उपल्बध गराई गाउँपालिकाको केही वडालाई खुल्ला दिशामुक्त गर्न छुट्टै बजेट छुट्याएर एउटा वडालाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा पनि ग¥यो र अहिले अरु वडाहरु खुल्ला दिशामुक्त हुन नजिक पुगिसकेको छ आश्विन १५, २०७५
महिला हिंसा रोक्न स्थानीय तहको कदम खोइ ? महिला हिंसाका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कार्वाही गर्न आवश्यक देखिन्छ । घटना घटिसकेपछि विभिन्न कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि घटन घट्नै नदिनका लागि स्थानीय तह सक्रिय हुन जरुरी छ । आश्विन १७, २०७५
पोखरीया नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा समपन्न, बहुआयमिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानियलाई नगरपालिकाका अनुभुति दिलाउने, संयुक्त नगर निर्माण गर्ने जस्ता बहुआयमिक योजनाहरु समेत अघि सारेको छ । पोखरीया नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीबाट १ करोड ४७ लाख ४० हजार चार सय ५५ गर्ने गरी कुल ४५ करोड ९५ लाख ५ हजारको निति तथा बजेट कार्यक्रम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सलमा खातुनल सार्वजनिक गरेकी थिईन् । आश्विन २०, २०७५
भ्रष्टाचारको विरुद्ध लडी समृद्ध गाउँपालिका बनाउने मेरो अन्तिम लक्ष्य : अध्यक्ष नथुनी प्रसाद आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरता खस्केको थियो । त्यसमा गाउँपालिकाबाट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरि शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाएका छौ । पुष १, २०७५
स्थानीय तहको गैर जिम्मेवारी, सबै रोगको औषधि सिटामोल सरकारले दिने अन्य औषधि आखिर कहाँ जान्छ त ? राम्रो तथा महँगो औषधि कर्मचारीले नै बाहिरको औषधि पसलमा बेच्ने गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ । चैत्र २३, २०७५
२ वर्ष वित्यो खै त ! स्थानीय निकायले कामको विवरण सार्वजनिक गरेको ? जनताको सुविधा भन्दा पनि आफनो स्वार्थमा बढी रमाए । जनताको घर घरमा पुग्ने बाटो भन्दा पनि आफनो घरमा पुग्ने स्कारपियोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे त्यसैले त भन्दै छन आम जनता खोई त विकास ? खोई त स्थानीय सरकारको कामको गति ? कार्तिक ५, २०७६
राहतमा राजनीति कहिले सम्म ? खोई त स्थानीय तहसंग तथ्यांङ्क विपतलाई रोक्न त सकिदैन । तर विपतले ल्याएको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने क्षति न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । बैशाख ४, २०७७
नेपाल पत्रकार महासंघको विपत कोषका लागी प्रदेश सांसद अन्जु यादव र उधोग वाणिज्य संघले गरे राहत सहयोग सञ्चारकर्मीहरूको सहयोगका लागि स्थापना गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको कोरोना कोषका लागि वीरगंज उधोग वाणिज्य संघले ३० हजार रुपैयाँ सहित स्वास्थ्य सतर्कता समाग्रिहरु सहयोग गरेको छ । जेठ १३, २०७८